Na inona na inona ao an-tranonao, dia tsy azo atao ny mamorona atmosfera tena tsara raha tsy mendrika ary mazava ho azy, sofina tsara tarehy. Ary mba hahatonga ny interior kokoa ho maotina, maoderina sy chic, tokony handinika tsara ny sofina hoditra hoditra.
Tombontsoa ho an'ny sofa kanto
Amin'izao fotoana izao, sofina kanto, sofas hoditra indrindra, no vahaolana tsara indrindra amin'ny fananganana tokana tsy manam-paharoa ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fiasana na eny amin'ny lakozia. Ankoatra izany, dia toerana malalaka izay ahafahanao miaina amim-pilaminana ho an'ny fivoriana mahafinaritra, ny sofina kiraro dia afaka manao asa maro hafa.
Ny sofina amin'ny rafitra mangalatra dia afaka miasa, raha ilaina, amin'ny anjara asan'ny fandriana tsara sy malalaka.
Raha manana efitrano lehibe ianao, ny efitrano fanokafana dia hiatrehana tanteraka ny anjara asan'ny sehatry ny zoning habaka.
Ny sofina kiraro dia sehatra iray fanampiny amin'ny fametrahana zavatra, satria saika ny modely rehetra dia manana toerana fanampiny amin'ny endriky ny lambam-pandriana vita amin'ny lamba rongony, tavy helo sy ny toy izany.
Mifidiana seza hoditra hoditra
Voalohany aloha, tokony hojerena fa ny hoditra - ny lafo dia lafo ary ny vidin'ny sofina kiraro amin'ny kitapo toy izany dia hiankina, ankoatra ny zavatra hafa (karazana filler, raki-tsoratra, dimensions) ary amin'ny kalitaon'ny (skin). Azo ampiasaina ny fitaovana famolavolana, ny mitefika, ny hain-trano, ny hoditra tsara tarehy na ny nubuck. Amin'izao fotoana izao, azonao atao ny mividy efitrano misy kobaka amina fitaovana vaovao sy maoderina - antsoina hoe eco-leather. Ny tena mampiavaka an'ity fitaovana ity dia ny hoe, na dia vokatra 100% aza ny vokatra azo avy amin'ny famokarana dia mamela azy "miaina", ny fitaovana manana hygroscopicity tena tsara, mahafinaritra ny fikitihana, izay zava-dehibe - azo antoka (tsy misy voka-dratsiny tsy misy voka-dratsiny) . Ny fampiasana ny teknolojia vao haingana indrindra amin'ny famokarana ny famokarana hoditra dia mamela ny famoronana zavatra mato-damosina toy izany fa tsy azo atao mihitsy ny manavaka ity fantsaràna ity avy amin'ny fanaka vita amin'ny hoditra marina. Noho izany, ny fampiasana ny famokarana hoditra ho toy ny fantsomamy dia mampihena ny vidin'ny vokatra, saingy tsy misy fiantraikany amin'ny endriny amin'ny fomba rehetra.
Alohan'ny hividianana sofina kiraro avy amin'ny hoditra marina dia tokony hamaritra mazava tsara ny toerana izay hipetrahana ity fanaka ity amin'ny ho avy. Ho an'ny efitrano fianarana na lakozia, ohatra, dia mora kokoa ny mividy modely kely tsy misy fakantsary. Ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny na efitrano fandriana dia mety misy efitranon'ny sofa, misy fitaovana mihodina (eurobook, frantsay clamshell, rafitra fitsaboana, akorony). Ity modely amin'ny sofa ity dia azo ampiasaina ho toerana mahafinaritra. Ankoatra izany, ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, azonao atao ny mifidy modely iray amin'ny rafitra fantsom-pokontany hoditra - tena manan-danja amin'izao fotoana izao. Amin'ny fanavaozana ny môdelin'ny singa dia tsy afaka manamboatra ny toeram-pialan-tsasatra sy ny torimaso fotsiny ihany ianao, fa koa amin'ny fahamendrehanao dia hameno ny efitrano malalaka.
Mazava ho azy, mendrika ny manapa-kevitra sy amin'ny loko ny sofa nividianana, miankina amin'ny efa misy ao anatiny. Ho an'ny efitrano miaraka amin'ny endrika manga, fotsy mainty sy mainty. Ao amin'ny trano iray monochrome misy loko marevaka, ny sofina hoditra mamiratra loko, ohatra, mena, dia hijery tsara. Ny teknolojia maoderina amin'ny famafazana ny hoditra dia mamela azy ho voasarona amin'ny loko sy ny lokony isan-karazany, noho izany dia sarotra ny mahita ny fantsom-panafody mifanaraka amin'ny fepetra takinao.
Amboaram-bolo hoditra hoditra - tsy misy afa-tsy fanamboamboaram-peo mahavariana amin'ny ao an-tranonao. Noho ny fisian'ny hoditra dia matevina sy malefaka, ny kitapo miaraka amin'ny fitaovana toy izany dia haharitra ela be ny endriny ivelany ary mampifaly anao amin'ny fahaizanao.
Bar ho an'ny curtain ao amin'ny efitra fandroana
Fasana ceramic planks
Rindrina fanatanjahan-tena ho an'ny ankizy ao amin'ny trano
Mirona plastika plastika
Sakafo ao amin'ny Art Deco
Mpanao horonantsary ambony indrindra
Partitions avy amin'ny plastika miaraka amin'ny tanany - dingana dingana amin'ny fampianarana
Efitra iray amin'ny fomba amam-borona
Ny mofon'ny zanakao - inona no tokony hatao?
Jiro mitsangana amin'ny tanana manokana
Fomba hisafidianana ny varavarana anatiny - torohevitra
Ny fanafody amin'ny tendan'ny tenda
Boka Ejipsiana - ireo modely sy loko modely
Vaksinina ho an'ny saka
Yoghurt amin'ny yoghurt
Ny fananganana ny Parlemantan'i Nouvelle Zélande
Liomanga an-jatony 2013
Noho ny fikarakarana ny tenda amin'ny zaza?
Kira Knightley, Elizabeth Hurley sy ny hafa tao amin'ny premiere of the opera "La Traviata"
Ny fihenan'ny lanjan'ny fahavoazana - ahoana no fomba fitarihana tsara ho an'ny vokatra faran'izay tsara?